Kuyini Ukuphathwa Kwamathegi Ebhizinisi? Kungani Kufanele Usebenzise Ukuphathwa Kwamathegi? | Martech Zone
IVerbiage esetshenziswa abantu embonini ingadideka. Uma ukhuluma ngokumaka ngokubhuloga, mhlawumbe usho amagama akhethiwe abalulekile ku-athikili tag futhi kwenze kube lula ukufuna nokuthola. Ukuphathwa komaka ubuchwepheshe obuhluke ngokuphelele nesisombululo. Ngokubona kwami, ngicabanga ukuthi ibizwa ngegama elibi… kepha sekuyigama elivamile kuyo yonke imboni ngakho-ke sizochaza!
Kuyini ukuphathwa kwamathegi?
Ukumaka isayithi lingeza amanye amathegi weskripthi ekhanda, emzimbeni, noma onyaweni lwesiza. Uma usebenzisa amapulatifomu ama-analytics amaningi, izinsizakalo zokuhlola, ukulandela ngomkhondo ukuguqulwa, noma ezinye izinhlelo ezinamandla noma eziqondisiwe zokuqukethwe, cishe ngaso sonke isikhathi kudinga ukuthi ufake imibhalo kwizifanekiso eziyinhloko zohlelo lwakho lokuphathwa kokuqukethwe. Izinhlelo zokuphathwa komaka (i-TMS) zikunikeza iskripthi esisodwa sokufaka kuthempulethi yakho bese ukwazi ukuphatha bonke abanye ngeplatifomu yomuntu wesithathu. Uhlelo lokuphathwa kwamathegi likuvumela ukuthi wakhe iziqukathi lapho ungahlela ngokukhalipha amathegi ofisa ukuwaphatha.
Ku-an Ibhizinisi inhlangano, ukuphathwa kwamathegi kunika amandla iqembu lokumaketha, iqembu lokwakha iwebhu, amaqembu wokuqukethwe namaqembu e-IT ukuthi asebenze ngokuzimela. Ngenxa yalokhu, iqembu lokumaketha ledijithali lingasebenzisa futhi liphathe amathegi ngaphandle kokuthinta okuqukethwe noma amaqembu okwakha… noma ukuthi lenze izicelo kumaqembu e-IT. Ngokwengeziwe, amapulatifomu wokuphatha amathegi ebhizinisi anikezela ukuhlolwa, ukufinyelela, nezimvume ezidingekayo ukuthunyelwa kwejubane futhi sinciphise ubungozi Ukuphuka isayithi noma uhlelo lokusebenza.
Qiniseka ukuthi ufunda okuthunyelwe kwethu ekuthumeleni Ukuphathwa kwamathegi we-ecommerce, nohlu lwama-tag angu-100 abucayi okufanele usetshenziswe futhi ulinganise ukuxhumana kwamakhasimende akho nokuziphatha kokuthenga.
Kungani Ibhizinisi Lakho Kufanele Lisebenzise Uhlelo Lokulawulwa Kwamathegi?
Kunezizathu eziningana zokuthi kungani ungafuna ukufaka ifayela le- ukuphathwa komaka ekusebenzeni kwakho.
Ku-an imvelo yebhizinisi lapho umthetho olandelwayo, ukuthobela umthetho, kanye nokuphepha kuvimbela abathengisi ekufakeni imibhalo kalula kwi-CMS yabo. Izicelo zokungeza, ukuhlela, ukuvuselela noma ukususa amathegi wesayithi kungabambezela ikhono lakho lokuphatha imizamo yakho yokumaketha. Uhlelo lokuphathwa kwamathegi lulungisa lokhu ngoba udinga kuphela ukufaka umaki owodwa kusuka ohlelweni lwakho lokuphathwa kwamathegi bese uphatha konke okusele kuhlelo. Akudingeki uphinde wenze esinye isicelo eqenjini lakho lengqalasizinda!
Amasistimu wokuphatha amathegi anikwe amandla kuwo wonke amanethiwekhi wokulethwa kokuqukethwe okushesha ngendlela emangalisayo. Ngokwenza isicelo esisodwa kwinkonzo yabo bese ngemuva kwalokho ulayisha imibhalo ngaphakathi kwesiza sakho, unganciphisa izikhathi zokulayisha futhi uqede amathuba okuthi isiza sakho sizomisa uma insiza ingasebenzi ezansi nomfula. Lokhu kuzokhuphula amazinga womabili wokuguqulwa futhi kusize nokwenza kahle injini yakho yokusesha.
Izinhlelo zokuphathwa komaka zinikeza ithuba loku gwema ukumaka okuphindwe kabili, okuholela kuzilinganiso ezinembe kakhulu zazo zonke izakhiwo zakho.
Izinhlelo zokuphathwa komaki zivame ukunikela khomba bese uqhafaza ukuhlanganiswa ngazo zonke izixazululo omaka ngazo iwebhusayithi yakho. Akunasidingo samathani ekhophi nokunamathisela, vele ungene ngemvume bese unike amandla isixazululo ngasinye!
Izinhlelo eziningi zokuphathwa kwamathegi ziye zavela futhi zinikeza izixazululo ezinamandla ze- ukuhlolwa kokuhlukanisa, ukuhlolwa kwe-A / B, ukuhlolwa kwe-multivariate. Ufuna ukuhlola isihloko esisha noma isithombe esizeni sakho ukuze ubone ukuthi sikhulisa yini ukubandakanyeka noma amanani wokuchofoza? Qhubeka ngqo!
Ezinye izinhlelo zokuphathwa kwamathegi zinikela ukulethwa kokuqukethwe okunamandla noma okuqondisiwe. Isibonelo, ungahle uthande ukushintsha isipiliyoni sesayithi lakho uma isivakashi kuyikhasimende ngokuqhathaniswa nethemba.
Izinzuzo eziyi-10 Zokuphathwa Kwamathegi
Nansi ukubuka konke okuhle kwe-infographic yezinzuzo eziphezulu eziyi-10 zokuphathwa kwamathegi kubathengisi bedijithali abavela Nabler.
Amapulatifomu we-Enterprise Tag Management Systems (TMS)
Okulandelayo uhlu lwe izixazululo zokuphatha ithegi yebhizinisi, qiniseka ukuthi ubukela amavidiyo kokunye kwawo ukuthola incazelo eyengeziwe ngamakhono okuphathwa kwamathegi nezinhlelo zokuphathwa kwamathegi.
Ukwethulwa Kwengxenyekazi ye-Adobe Experience - Ukuzama ukuphatha ukuthunyelwa kohlangothi lwamakhasimende kubo bonke ubuchwepheshe besitaki sakho sokumaketha kungahlangabezana nezinselelo. Ngenhlanhla, i-Experience Platform Launch yakhiwe nge-design yokuqala ye-API, evumela ukubhala phansi ukuzisebenzisela ukuthunyelwa kobuchwepheshe, ukushicilela ukuhamba komsebenzi, ukuqoqwa kwedatha nokwabelana, nokuningi. Ngakho-ke imisebenzi edla isikhathi yesikhathi esedlule, njengokuphathwa kwethegi yewebhu noma ukumiswa kwe-SDK yeselula, ithatha isikhathi esincane - ikunikeze ukulawula okuphezulu kanye ne-automation.
Ensighten - Phatha wonke amathegi akho omthengisi nedatha ngokusebenzisa isikhombimsebenzisi esisodwa enembile, esifaka ngaphezu kokuhlanganiswa okungu-1,100 komthengisi we-turnkey. Hlanganisa futhi ulinganise imithombo yedatha ehlukanisiwe kubuchwepheshe nakumadivayisi ukushayela i-ROI enkulu kusuka kusitaki sakho sobuchwepheshe esivela ngomphathi wethegi eyodwa yedatha.
Isiphathi Somaka we-Google - Isiphathi Somaka seGoogle sikuvumela ukuthi ungeze noma ubuyekeze amathegi wakho wewebhusayithi kanye nezinhlelo zokusebenza zeselula, kalula futhi mahhala, noma kunini lapho ufuna khona, ngaphandle kokufaka igciwane kubantu be-IT.
I-Tealium IQ - I-Tealium IQ inika amandla izinhlangano ukulawula nokuphatha imininingwane yazo yamakhasimende nabathengisi be-MarTech kuyo yonke iwebhu, iselula, i-IoT namadivayisi axhunyiwe. Ifakwe i-ecosystem yokuphela Ukuhlanganiswa komthengisi we-turnkey okungu-1,300 okunikezwa ngamathegi nama-API, ungakwazi ukusebenzisa kalula nokuphatha amathegi wabathengisi, uvivinye ubuchwepheshe obusha, futhi ekugcineni ulawule isitaki sakho sobuchwepheshe bokumaketha.
Tags: ukwethulwa kwe-adobe experience cloudipulatifomu yesipiliyoni se-adobeukwethulwa kwe-adobeumphathi we-adobe tagsoightenukuphathwa kwamathegi ebhizinisiumphathi wethegi yebhizinisiumphathi we-google tagukuphathwa kwamathegiamapulatifomu wokuphatha amathegiukuphathwa komakatealium iqtms